❤️ Uyengeza kanjani indaba ku-Instagram - Facebook
Banezinhlelo ezimbili zokukuqalisa, bekuhlale kunokudideka mayelana nokuthi uyithumela kanjani Indaba ye-Instagram. Uma uthumela indaba yakho yokuqala isikhashana, ungathepha + esithombeni sakho sephrofayela futhi ungakwazi ukwengeza isithombe noma ividiyo emfushane endabeni yakho.
Kodwa uma usukwenzile lokho, i + iyanyamalala. Pho wenzani uma ufuna ukuthumela enye indaba ?
Siyabonga ngesibuyekezo esisha se-Instagram, lolu daba seluxazululiwe ngandlela thize. Manje kulula kakhulu futhi kulula kakhulu ukushicilela indaba, futhi kunezindlela ezintathu ezinkulu:
Thinta uphawu + njengoba kukhonjisiwe ngenhla – kungenzeka kuphela ngendaba entsha
Swayiphela kwesokudla kokuthunyelwe kwakho
Thepha isithonjana sekhamera phezulu kwesokudla.
I-Instagram ngokusobala ivumile ukuthi abasebenzisi bayo, ikakhulukazi abantu abangekho Abasebenzisi be-Instagram abanothando, ezwe ukudideka okukhulu. Uma ufuna umbono osheshayo wendlela ngayinye, hlola umhlahlandlela wethu onezingxenye ezintathu ngezansi.
Indaba ye-Instagram evela esithombeni sephrofayili
Lena yinhle ngokuthumela indaba esheshayo, kodwa isebenza kuphela uma ungazange uthumele indaba edlule emahoreni angu-24 edlule. Ungasebenzisa le ndlela kokuphakelayo kwakho noma ikhasi lephrofayela.
Vele uthephe isithombe sakho sephrofayela ngophawu +.
Ungakwazi ke ukuthatha isithombe noma ividiyo noma ulayishe esisodwa.
Bese uchofoza Indaba yakho ngezansi kwesokunxele bese indaba yakho izoshicilelwa.
Thumela indaba ngokuswayipha kwesokudla
Bekulokhu kuyisici, kodwa uma ungazi ukuthi ikhona, unzima kakhulu ukumthola.
Vele uyidonsele ngqo kokuphakelayo kwakho.
Thatha isithombe noma usilayishe kusukela kulabhulali.
Thepha endabeni yakho ngezansi kwesokunxele futhi izoshicilelwa.
Thumela indaba ngokuchofoza ikhamera phezulu kwesokudla
Lesi isici esisha esikhulu esivela ku-Instagram futhi kusho ukuthi abantu sebengakwazi ukuthumela indaba ngendlela enembile kakhulu.. Ungakwenza lokhu ngokuthunyelwe kwakho.
Kusukela kokuthunyelwe kwakho, vele uthephe isithonjana sekhamera phezulu kwesokunxele.
Khetha isithombe noma ividiyo ozoyisebenzisa.
Chofoza endabeni yakho futhi indaba yakho izoshicilelwa
Inzuzo yezindlela ezimbili zokugcina ohlwini ukuthi ungazisebenzisa ukwengeza isithombe noma ividiyo eyengeziwe endabeni yakho, noma ngabe usuyithumelile. Indlela yokuqala ngeke isebenze uma usunayo I-Instagram Live Story.
Kungani Ngilahlekelwa Abalandeli Be-Instagram : 23 Izindlela zika-2021
23 Izindlela zika-2021Ngisiphi isikhathi esihle sokubhala ku-Instagram ?
23 Izindlela zika-2021ungase ufaneleke isikhathi eside, ukuvinjelwa okungapheli?